Hormuud News Friday, April 27th, 2018 | 08:14
[Monday, December 10th, 12] :: Denmark: 7 jirku waa inay yeeshaan kaadh baan
Denmark: Sanduuqa yar ee carruurtu ku urursadaan lacagta iyo buugga baanka waa in lagu beddelo kaadh baanka lagala baxo lacagta, si carruurtu aanay u gelin safka baanka, markay u baahdaan lacag xaqaljeeb ah.
Baananka Denmark ayaa ka fikiraya, inay kaadhadhka lagu la baxo lacagta siiyaan carruurta toddoba jirka ah, ayuu qoray wargayska Søndagsavisen.
Baananka qaarkood ayaa qofka siiya baanka lagula baxo lacagta, marku gaadho 12 jir.
- Hadday baananku sidaas rabaan, markaas waannu la eegaynaa soohdinta da'da, ayuu wargayska ku yidhi sharciyaqaanka lataliyaha u ah hawlwadeennada adeegatada, Søren Iversen.
- Laakiin waxa arrintu gebi ahaan ku xidhan tahay, in aannu hubinno, in carruurta iyo waalidku dereemaan kalsooni iyo nabadgelyo, ayuu intaas raaciyay.
Norway ayaa isticmaasha
Baanka noowijiyanka ee SpareBank 1 ayaa sannad ka hor siiyay carruurta kaadhka lagula baxo lacagta, kaasoo ay waalidku uga dalbadaan baanka netka. Kaadhka ayaa carruurtu ku isticmaali karaan wiiggii 400 koron, lacag dheeraad ahna aanay ka saari karin.
Xeerarka kaadhka ayay iska kaashadeen hawlwadeennada adeegatada Norway iyo hayadda Barnevakten, oo ah hayadda carruurta noorwijiyanka.
Baananka deenishka ayaa u bogay fikradda, sida ka muuqata jawaabaha suaalo uu wargaysku waydiiyay 10ka baan ee ugu waawayn dalka.
- Ma qabno in carruurtu la wareegaan magaalada lacag kaash ah. Waxay halis ugu jiraan, inay kalunto, waana lagu soo eegan karaa kaashka.
- Waxa u nabadgelyo roon, inay lacagta ku haystaan kaadh leh baaq qarsoodi ah, ayay wargayska ku tidhi agaasime laameed ka tirsan baanka Sydbank, Malene Morsing.
Baanaku waa u diyaar
Baadhitaanka ayaa muujiyay saddex baan oo u diyaar ah tallaabadan, halkan shan kalena weli ka fikirayaan.
- Laakiin waa inuu noqdo kaadh qofku kula baxi karo keli ah waxa ugu jira, oo aanu lacag kale kula bixi karin, teeda kale waa inay waalidku geli karaan oo goaamiyaan xuduudda isticmaalka, ayay tidhi masuulka hormood ah ee kaadhadhka Jyske Bank, Lise Henriksen.
Borofisar ka tirsan kulliyadda ganacsiga, CBS, oo khabiir ku ah carruurta, miidhiyaha iyo adeegashada, Birgitte Tufte, ayaan qabin, inay habboon tahay in kaashka loo isticmaalo ujeeddo barbaarineed, oo carruurtu lacagta u dareemaan sidaas.
- Baananka ayaa tallaabadan u baahan ee carruurtu u ma baahna, ayay ku tidhi wargayska.